वर्षा राउतको आज जन्मदिन, कति वर्षकी भइन् उनी ? – live 60media
वर्षा राउतको आज जन्मदिन, कति वर्षकी भइन् उनी ?
काठमाडौ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका बर्षा राउतको आज जन्मदिन परेको छ । उनको आज २८ औं जन्मदिन हो । आज नायिका बर्षाले आफ्नो २८ औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् । कोरोना जोखिमका कारण उनको यसवर्षको जन्मदिन अन्य दिनको जस्तो भब्य भने हुने छैन । २०४९ साल मंसिर २८ गते सिन्धुली जिल्लामा जन्मेकी वर्षा पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका हुन् ।
आज उनको जन्मदिनको अवसरमा उनलाई बिहानैदेखी शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । उनले सामान्य जन्मदिन मनाउने तयारी गरेको बताइएको छ । चलचित्र ‘नाइँ नभन्नू ल’बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रबेश गरेकी बर्षाले हालसम्म धेरै फ्यानहरु कमाइसकेकी छिन् । चलचित्र नाइँ नभन्नू ल’, ‘छक्का पञ्जा’ सिरिज, ‘जात्रा’, जात्रै जात्रा उनका हिट चलचित्र हुन् ।
४ वर्षको अवधिमा वर्षाले १२ वटा चलचित्रमा काम गरेकी छन् । पछिल्लो समयमा भने उनलाई केही म्यूजिक भिडियोहरुमा पनि देख्न सकिन्छ ।नेपाल भारत सीमाबारेमा उनले दिएको अभिव्यक्ति निकै विवादास्पद भएको थियो । उनले त्यसवारे माफी समेत मागिसकेकी छन् ।
← होसियार ! सुनका गहना लगाउनु हुन्छ भने, एकपटक अवस्य पढ्नुहोस –
४२ बर्षिय नेपाली सुरक्षागार्ड भिम बहादुर मगरको उपचार नपाएर मलेसियामा निधन →